Raadinta Google ee Natiijada Tayada Dagaal | Martech Zone
Monday, August 15, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
SEO.com ayaa sii daayay infographic ah dadaalka Google si ay u bixiyaan natiijooyinka raadinta tayo sare leh. Waa dib u eegis xiiso leh dib-u-eegisyada muhiimka ah ee Google ay sameysay ee lagula dagaallamayo bogagga natiijooyinka raadinta ee aan loo qalmin. In kasta oo tani aysan u ekaan karin inay adiga saameyn kugu yeelaneyso, run ahaantii way sameysaa. Hubinta in bartaada ama boggaga macaamiishaadu ay raacayaan dhaqamada ugu wanaagsan ee matoorada raadinta ay lama huraan tahay.
Halkan waxaa ah burburka taariikhda ka SEO.com boostada:
Cusbooneysiinta Panda (Febraayo 2011) - Google waxay jabisay beeraha waxyaabaha ku jira iyo boggag leh tayo hoose, dhuuban ama xoqan. Diirad saarida waxaa lagu saarey nuxur gaar ah iyo qoto dheer nuxurka. Degello badan ayaa cusboonaysiinta wax ku noqotay. Inta badan beeraha wax laga qoro si adag ayaa loo garaacay. Cusbooneysiinta Panda ayaa lagu soo rogay dhowr tallaabo sanadka oo dhan.
Cusbooneysiinta Mayday (Maajo 2010) - Google wuxuu bilaabay cusbooneysiin diiradda saaraya taraafikada dabada dheer.
Cusbooneysiinta kafeega (Ogosto 2009) - Cusbooneysiin diiradda saareysa kaabayaasha si loogu oggolaado Google inay si fiican uga muujiso macluumaadka khadka tooska ah, oo ay u sameyso si dhakhso leh. Waxay awood u siisay ka shaqeynta qoto dheer, taas oo u saamaxday Google inay soo gudbiso natiijooyinka raadinta ee khuseeya. Cusbooneysiintan ayaa ugu dambeyntii u oggolaatay Google inay soo bandhigto xawaaraha bogga oo ah isir qiimeyn.
Cusboonaysiinta Pluto (Ogosto 2006) - Cusbooneysiin diiradda lagu saaray backlinks-ka ay soo tebisay Google. Ma jirin wax isbeddel ah oo muhiim ah natiijooyinka mashiinka raadinta.
Aabbe weyn (Febraayo 2006) - Google wuxuu diirada saaray isku xirnaanta soo galitaanka iyo bixitaanka. Goobaha aad ugu kalsoon kalsoonida xiriiriyeyaasha, ama ku xiran boggag badan oo spam ah waxay arkeen bogag laga waayey tusmada. Bogagga Spam-ka waxaa loo raray qayb kaabis ah natiijooyinka raadinta. Isticmaalayaashu waxay ogaadeen in xitaa ka dib markii ay u hoggaansameen caawimaadda Google in bogaggooda internetku wali sii soconayaan.
Cusbooneysiinta Jagger (Oktoobar / Nofeembar 2005) - Google waxay ku dhiirrigelisay dadka isticmaala inay ka bixiyaan jawaab celin ku saabsan websaydhada isticmaalay xeeladaha SEO hat madow si ay si fiican u darajo yeeshaan. Goobaha lagu ogaaday inay adeegsanayaan farsamooyinka noocan oo kale ah ayaa laga saaray natiijooyinka raadinta. Google wuxuu nadiifiyey dhibaatooyinka soojireenka ah wuxuuna diirada saarey ku xirnaanta isku xirnaanta.
Cusboonaysiinta Allegra (Febraayo 2005) - Tani waxay ahayd isku day ay Google ku dooneyso inay ku ogaato boggaga spam-ka ee wali ku guuleystey inay ku sarreeyaan natiijooyinka raadinta. Google waxay weydiisatay isticmaaleyaasha inay ka bixiyaan jawaab celin ku saabsan boggaga runti u qalmay qiimeynta sare laakiin aysan helin. Isticmaalayaashu waxay ka cawdeen in boggaggooda laga waayey natiijooyinka raadinta iyo in qaar ka mid ah bogagga spam ay wali si fiican u kala sarreeyaan.
Cusboonaysiinta Bourbon (Maajo 2005) - Google ayaa cusbooneysiintan cusbooneysiisay iyadoo ka jawaabeysa cabashooyinka spam iyo codsiyada dib-u-darista. Isbedelada istiraatiijiyadeed ee geeddi-socodka ayaa la hirgeliyey si ay uga dhigto mid waxtar badan. Cusboonaysiinta ayaa sidoo kale diirada saarey ka guurista xarumihii hore ee xogta una guurey kuwa cusub.
Cusbooneysiinta Brandy (Febraayo 2004) - Google waxay xooga saartay ereyada sida aaminaada, awooda iyo sumcadda. Cusboonaysiinta ayaa muujisay in bixinta macluumaadka ku habboon ay tahay furaha. Muhiimad weyn ayaa la saaray tayada waxyaabaha ku jira websaydh. Google waxay sidoo kale carabka ku adkeysay muhiimada ay leedahay Indexing-ka Sahminta Cilmiga Lahaa.
Cusboonaysiinta Austin (Janaayo 2004) - Cusbooneysiinta ayaa diirada lagu saaray dhaqan la yiraahdo Qaraxyada Google, halkaasoo dadku ku maareeyeen nidaamka si ay u soo saaraan natiijooyin marin habaabin ah. Diiraddii ayaa loo weeciyay goobaha leh cufnaanta ereyga ugu yar iyo isku xirnaanta gudaha oo wanaagsan. Xidhiidhyada laxiriira waxaa lasiiyay culeys dheeri ah oo kujira boggagaas oo kuxiran boggaga kale ee warshadaha la midka ah waxay kufiicanyihiin natiijooyinka raadinta.
Cusbooneysiinta Florida (Nofeembar 2003) - Cusbooneysiintu waxay muujisay isbeddelka Google ee ka imanaya miirayaasha fudud ee isku dayga ah in la fahmo macnaha guud ahaan baaxadda raadinta iyo natiijooyinka raadinta ee suuragalka ah. Cusboonaysiinta ayaa ku nadiifisay spam iyada oo la adeegsanayo isku xirnaan fudud iyo astaamo kale oo siiyay culeys dheeraad ah goobaha si fiican loo habeeyay oo nadiif ah. Maamulayaasha websaydhadu way soo dhoweeyeen cusbooneysiinta waxayna muujisay in Google ay mudnaan sare siineyso danaha baarayaasha. Cusboonaysiinta waxay ahayd isku day lagu dhiirrigelinayo degellada koofiyadaha cadcad, ee u hoggaansamaya shuruudaha tayada.
Cusboonaysiinta Esmerelda (Juun 2003) - Saddexaad taxane ah oo cusbooneysiin ah oo doorbiday bogag siinaya macluumaad gaar ah oo soo booqde ah. Cusbooneysiinta ayaa shaaca ka qaaday in bogagga gudaha ee degelku ay ku habboonaan karaan cusbooneysiinta Dominic, taas oo u muuqatay inay siinayso doorbid bogga hore xitaa raadinta kuwaas oo loogu talagalay weydiin gaar ah. Isticmaalayaasha ayaa soo sheegay in spam-ka uu aad uga yaraa wixii ka dambeeyay markii Dominic iyo Cassandra la cusbooneysiiyay.
Cusboonaysiinta Dominic (Maajo 2003) - Cusbooneysiintan waxaa loogu magac daray maqaayada pizza-ka ee ku taal magaalada Boston oo inta badan ay soo booqdaan ka soo qeyb galayaasha PubCon. Cusboonaysiinta ayaa diirada saareysay sameynta mawduuca habka raadinta oo ku saleysan, iyo isku xirka xarunta xogta iyo raadinta gaar ah. Cusboonaysiinta ayaa cadeysay in xarun kasta oo xog loogu tala galay in lagu sameeyo waxyaabo kala duwan.
Cusboonaysiinta Cassandra (Abriil 2003) - Cusbooneysiintan ayaa diiradda saareysa ku habboonaanta magaca domainka. Fikradda ayaa ahayd in shirkaduhu doortaan magac ka tarjumaya magacyadooda domain.
Cusbooneysiinta Boston (Maarso 2003) - Cusbooneysiinta Boston waxay diiradda saartay xiriirinta imanaya iyo waxyaabaha gaarka ah. Natiijadu waxay noqotay in maamuleyaasha websaydhada badani ay soo sheegeen hoos u dhac ku yimid gadaal-xiriiriyeyaal iyo hoos u dhigid ku jirta PageRank.